Kurondedzera Makomborero Okugadzirisa Kwekutanga Kwebasa
musha » Blog » Kurondedzera Makomborero Okugadzirisa Kwekutanga Kwebasa
Pane zvakawanda zvakakosha zvekutora pre-workout supplement nevamwe vavo vane zvimwe zvipimo zvekukweretesa zvikomborero zvakadai sekudaro zvakaratidzwa muhuwandu hwekutsvakurudza kwakaitwa kuti vaone kana vachiwedzera kukurumidza, simba, kutsungirira uye zvakanyanya kune aesthetics ye muviri. Understated ndeimwe yemhando iyo inoshandiswa zvinoshandiswa muzvibereko izvi.
&lt;A HREF=”http://ws-na.amazon-adsystem.com/widgets/q?rt=tf_cw&amp;ServiceVersion=20070822&amp;MarketPlace=US&amp;ID=V20070822%2FUS%2Fonlireba-20%2F8010%2F99f7931c-8490-4655-9de4-3fe9d8b08f7d&amp;Operation=NoScript”&gt;Amazon.com Widgets&lt;/A&gt;
Pre-Workout Supplement for Power Improve:
Muchirevo chaicho, chisiki chinogona kutorwa munenge nguva ipi zvayo yezuva uye zvakakosha kuti uve nawo mumuviri wako kuti uwedzere phosphagen system uye kusimbisa Adenosine Triphosphate yakachengetwa mumuviri wako, pre-workout supplements ichave yakasika mavari. Sezvakangoitika, tsvakurudzo dzinoverengeka dzakaitwa pamusiki dzakaratidza kuwedzera simba, kukurumidza, pamwe nekukura kwemisumbu yako.
Zvichida, zvishoma zvinyatsozivikanwe zvisinei, iyo inowanzoshandiswa inoshandiswa ndiyo caffeine iyo inowanikwa nevanotsvakurudza inowedzera simba nekutsungirira uye inobatsira pakurwisana kuneta panguva yekudzidziswa nekukurudzira kugadzirwa kweurourotransmitter beta-endorphin.
Pre-Workout Supplement for Endurance Endurance:
Kunze kwekuwedzera simba, pane zvimwe zvigadziri zvinowanikwa mukutanga kushanda kwezvokuwedzera zvekusimudzira kutsungirira. Chimwe chezvakawedzerwa zvakadai zvakakokwa mumakore ose apfuura iyi isiri-amino acid beta alanine nokuti inozivikanwa nekuderedza lactic acid, inobatsira pakurwisana kuneta uye inovandudza kushandiswa kwepfint pakupera kwepurogiramu yekuita basa yakakwana. Zvinonzwisisika kuti izvi zvinowanikwa nokuzvibatanidza pamwe chete nemamwe amino acid anonzi L Histidine pakuumba dipeptide carnosine iyo inogona kuderedza kuvakwa kwe lactic acid mumisungo saka, kusimbisa simba revanaerobic mumuviri.
Chimwe chikwata chinozivikanwa nokuda kurwisana kuneta nderimline malate. Iko kusanganisa kwakasiyana-siyana kwemajini emunyu marate uye amino acid citrulline uye zvidzidzo zvakawanda zvakaratidza pazviri zvichiratidza kuti zvinowedzera kutamba kwemitambo zvakanyanya kuderedza kunzwa kwokuneta nemhaka yekusimudzirwa kwei oxidative adenosine triphosphate iyo inobudiswa panguva yekudzidzira uye inowedzera phosphocreatine kupora post postworkout iyo inoratidza mupiro weiyo oxidative ATP synthesis kumwero mukuru wekugadzira magetsi.
Zvichinyatsojeka, izvi zvinoreva kuti izvi zvinowedzera kukwanisa kuwedzerwa kugovera oxygen kumisungo, zvichiita kuti kuwedzera patsva kweAdenosine triphosphate, kemikemikari inodiwa kuti mishonga itange kubvumirana uye kushanda zvakanaka uye zvakasimba.
December 29, 2014 Admin Blog, Pre-Workout No Comment
Shandisa Zvakawanda Kuwana Kuwedzerwa Kwakawanda paGaiam Valid kusvika 12 / 24 / 14
Groupon C4 Pre-Workout Chibvumirano: 3 Containers Plus SmartShake Bottle $ $ 59.99!